‘दानवीर बाबुको छोरा हुनुमा गर्व छ’ – Chitwan Post
‘दानवीर बाबुको छोरा हुनुमा गर्व छ’
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख ८, २०७४
कमल महतो युवा व्यवसायी हुन् । रत्ननगर–१, स्थित निपनीमा होटल बेडरक नामक रिसोर्टका मालिक हुन् उनी । उनको परिचय होटल व्यवसायीमा मात्रै सीमित छैन । उनका बाबु स्वर्गीय नाथुराम महतो, जसको नाम रत्ननगरमा नसुन्ने र उनका दान र पुण्यकर्मबारे जानकारी नहुने विरलै होलान् । नाथुरामले रत्ननगर नगरपालिकाका लागि एक विगाह, हरिहर मन्दिरका लागि एक विगाह र नेपाल माविका लागि एक विगाह जग्गा दान गरेका थिए । निपनीदेखि ढुङ्गाघाटसम्मको सडकको पूर्वाधार उनैले गरेका थिए । खगेरी सिंचाईदेखि विकासका विविध कर्ममा होमिएका नाथुराम प्रधानमञ्चसमेत भए । उनकै घरमा तत्कालीन महेन्द्र राजा चितवन आउँदा बस्ने, खाने व्यवस्था हुन्थ्यो । यिनै जमिन्दारका छोरा, जसलाई पुख्र्यौली सम्पत्तिको कत्ति घमण्ड छैन । उनी कर्ममा विश्वास गर्छन् । र, कर्मशील पनि छन् । उनको तडकभडक जिन्दगी छैन । समाजसेवासँग जोडिने संकल्प बोक्ने यिनै शान्त स्वभावका ३५ वर्षे युवासँग चितवन पोष्टले गरेको चियागफ यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. दानवीर बाबु ‘नाथुराम’को छोरा भनेर चिनिन पाउँदा कस्तो अनुभूति हुन्छ ?
२. तपाईंको बुबाको मार्गमा तपाईं पनि हुनुहुन्छ कि ? ‘दानवीर’ समाजसेवीको पुस्तान्तरण कति सम्भव छ ?
३. जमिनदारको छोरा भन्ने त तपाईंको ‘ट्रेडमार्क’ बनिसक्यो । कति थियो होला त्यसबेला जमिन्दारको पुख्र्यौली सम्पत्ति ?
४. तपाईंले सञ्चालन गर्नुभएको रिसोर्ट (पूर्वी) चितवनमा प्रसिद्ध छ । यो आर्जित हो कि पुख्र्यौली ?
– तपाईंलाई ढाँट्ने कुरा भएन । जमिन बुबाकै पुख्र्याैली हो । जे जति छ त्यो सबै बुबाकै देन हो । आफूले आर्जन गर्न सकेको छैन ।
५. यहीँ मनग्गे सम्पत्तिको मालिक हुँदाहुँदै पनि कमाउन विदेश जानु भयो नि ?
६. तपाईंको स्वभाव र व्यवहार साधारण नै छ । एकाएक व्यवसाय गर्ने सोचचाहिँ कसरी पलायो ?
७. तपाईंको रिसोर्टको विशेषता के छ ? किन आउने ग्राहक तपाईंकै रिसोर्टमा ?
–हामीकहाँ शान्त र पारिवारिक वातावरण छ । प्राकृतिक सौन्दर्य छ । स्थानीय खानाका परिकारदेखि संसारमा चलेका फूडहरुको स्वाद चाख्न पाइन्छ । सबै प्रकारका खाना र त्यो पनि आफैँले डिजाइन गरेको मिनुअनुसार ग्राहकलाई सेवा दिइरहेका छौँ । ग्राहककै चाहनाबमोजिम साप्ताहिक रुपमा मिनु परिवर्तन हुने गर्छ । हामी गुणस्तरमा सम्झौता गर्दैनौँ । ताजा र सीफूडको मज्जा हामीकहाँ उपलब्ध छ । पार्टी, भोज सेमिनारलगायतका कार्यक्रमकालागि पनि उपयुक्त वातावरण छ । ग्राहकहरु सन्तोष मानेर खुसी भएर जानु हुन्छ । त्यो हाम्रो लागि क्रेडिट हो र सन्तुष्टि पनि ।
८. व्यवसायबाट कत्तिको सन्तुष्टि पाउनु भएको छ ?
–सन्तुष्ट नै छु । इमान्दारितापूर्वक काम गरेको छु । त्यसैले ग्राहकहरु खोजीखोजी आउनुुहुन्छ । तर कहिलेकाहीँ स्टाफ नपाउँदा समस्या पर्छ । भ्याइनभ्याइ हुन्छ । व्यवसायमा अफ्ठ्यारो पनि पर्छ भनेर सन्तोष मान्छु । समग्रमा सन्तुष्टि मिलेकै छ ।
९. समाजमा पनि तपाईंको योगदान केही छ कि ?
– म पनि सामाजिक प्राणी नै भएकाले यही समाजका लागि मेरो भूमिका रहनु स्वभाविक हुन्छ । हालै रत्ननगर–१ निपनी थारुगाउँमा व्रह्मस्थान संरक्षण समिति गठन । जहाँ पहिले बुबाले पूजा गर्नुहुन्थ्यो । म उहाँको कान्छो सुपुत्र भएकाले अध्यक्ष बन्न सबैले आग्रह गर्नुभयो । व्रह्मस्थान थारुहरुले पूज्ने देवता हुन् । जसको उचित संरक्षण र सवद्र्धन हुन सकेको थिएन । थारुहरुको चिनारी नै लोप हुन लागेको अवस्थामा परम्परा जोगाउने अभिभारा बोकेको छु । आवश्यक परेको खण्डमा सामाजिक गतिविधिका अरु क्षेत्रमा पनि लाग्ने र सेवा गर्ने सोच छ ।
१०. अब त राजनीति गर्न र नेता बन्न पनि पैसावाल नै हुनुपर्ने भयो । तपाईंमा पनि राजनीति गर्ने तिर्खा छ कि ?
–अहिले नै राजनीति गर्ने तिर्खाचाहिँ लागेको छैन । केही भन्न सकिन्न । जीवनमा त्यो क्षेत्र पनि खुल्ला छ । समयअनुसार र मागअनुसार राजनीतिमा पनि होमिन संभावना छ । राजनीति पनि आखिर समाजकै सेवा हो । समाजसेवाबाट म कहिल्यै टाढिन सक्दिन ।
‘आजीवन समाजसेवामा कटिवद्ध छु’ : तीर्थराज न्यौपाने
अब सबै चुनावमा जानुपर्छ